Sida loo Beddelaan Mpg in FLV on Windows iyo Mac
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Mpg in FLV in Windows iyo Mac (Yosemite ka mid ah)
Diinta Mpg in FLV macnaheedu ma aha dhib ama dhibaatooyin ka dhan haddii aad leedahay qalab waxtar leh qaar ka mid ah sida Video Converter on gacanta. Warbixin ku saabsan in ay ka soo baxaan badan oo online iyo offline, laakiin halkan, aad soo bandhigay Mpg ah mid aad u fudud in ay FLV diinta la kaaliyaha ee xirfadle Video Converter, taas oo, si dhab ahaan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gaadho oo aad Mpg in hawsha FLV gudahood 3 tallaabooyinka iyo tayada khasaaraha-yar. Waa la heli karaa in aad qabato shaqada labada Windows iyo OS X Mac ay ka mid yihiin Mountain Libaaxa iyo Libaaxa.
1. furitaanka barnaamijka Mpg in FLV iyo dajiyaan files Mpg u galay
Marka la isticmaalayo version Windows ee Mpg in ay FLV Video Converter , si toos ah aad u soo jiidi kartaa jeedi videos ama guji badhanka dar Faylal ay ku interface ugu weyn;
Fiiro gaar ah : Haddii Mpg in ay FLV Mac ​​Video Converter loo isticmaalo, waxaad kale oo jiidi karaan & hoos u files si ay Converter iyo sidoo kale madaxa si "File" iyo dooran "Media Load Files".
Fiiro gaar ah: Dhab ahaantii, labadan converters Video leeyihiin qaab ballaaran taageertaa, taas ayaana ah, in la yidhaahdo, aad u bedeli karaan video files dhammaan qaabab loo jecel yahay oo ay ku jiraan AVI, MP4, MOV, M4V, MKV, FLV, 3GP, AVCHD iyo wixii la mid ah.
2. Set FLV sida qaab wax soo saarka aad
Fur liiska qaabka adigoo gujinaya qaab icon dhinaca midig ee suuqa kala this, ka dibna tag "qaab"> "Web" markaas dooran "FLV" .Haddii aad ku isticmaalayso Mac Mpg in FLV Converter, ka dibna aad u dhigay "FLV" sida qaabka wax soo saarka aad u qabo qaybta "Web Sharing".
3. Ku bilow Mpg inay diinta ka FLV
Hit "Beddelaan" badhanka si loogu badalo Mpg in FLV. Iyadoo Converter Video , lagu siiyo qaar ka mid ah goobaha filaayo in YouTube, Facebook, iyo vimeo iwm
Fiiro gaar ah : Haddii aad isticmaasho Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray), kaas oo bixisaa qaab loogu xiro hoos your computer si toos ah ka dib markii aad diinta, haddii ay dhacdo in aad leedahay your computer inuu ka tago iyo baxo xisbi ama taariikhda.
Macluumaad Rewards for galinta files FLV galay aad blog ama kale web site:
Haddii aad ku saabsan in ay geliyaan, kuwaas oo la gediyay FLV video files galay aad blog ama goobaha kale ee jira, aad bixisey qaar ka mid ah code waxtar leh HTML for inaad saasoo kale yeeshaan. Iyaga Gali aad page. Ka dib markii in, saaxiibadaa ama dadka kale awoodaan inay ku raaxaystaan ​​aad video files online fudayd. By habka, waxaad astaysto qiyamka width iyo dhererka sida ay baahidaada.
www. wondershare.com - waa magac ka mid ah server web / goobta
folder - Jidka meesha file FLV iyo ciyaaryahanka Flash ku yaalaan
video.flv - Magaca faylka FLV aad
Leeyihiin waayo-aragnimo fiican oo warbaahinta la wadaago saaxiibo aad video files!
Sida loo rogo ama Videos dhexeeya Mpg iyo AVI